Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 18)
[APK] Download ugbu a ụdị ọhụrụ nke Facebook maka gam akporo yana bọtịnụ ọhụrụ Dịka Mmeghachi omume
Anyị na-ewetara gị ozugbo na APK ụdị Facebook ọhụụ maka gam akporo yana bọtịnụ ọhụrụ Dịka mmeghachi omume
HATOMICO, ngwa nke gụrụ gị natara WhatsApp, Hangouts, Telegram na Line gị n'olu dara ụda ma nweere onwe gị
Taa, anyị na-ewetara ngwa nke gụrụ agụpụta WhatsApp natara, Hangouts natara, akara anara, Telegram natara, Twitters natara na ọbụlagodi ọkwa Google Ugbu a.
Ihichapu akụkọ ifo batrị na ama
Anyị na-amụnye ìhè na otu n'ime isiokwu kpatara ihe kachasị mkpa kemgbe anyị nwere ama, ndụ batrị na akụkọ ifo na akụkọ ifo ya.
Etu ị ga-esi nwee ọfụma mmeghe ọhụụ Facebook site na gam akporo
Taa, anyị na-akọwa ọrụ ọhụụ ọhụụ nke bọtịnụ Facebook na-eme yana ịnụ ụtọ ya na gam akporo tupu emelitere ngwa ọrụ emelitere.
Swiftkey na-ekwupụta Neural Alpha, keyboard ọhụrụ dabere na teknụzụ ntanetị
Swiftkey kpọgara anyị na keyboard nke akpọrọ Neural Alpha nke na-anwa ịkọ okwu ndị anyị ga-eji teknụzụ ọhụrụ dee.
10 obere ma na-adọrọ mmasị atụmatụ nke gam akporo 6.0 Marshmallow na ị gaghị ama
Android 6.0 Marshmallow nwere usoro nke obere ma dị ike nke anyị na-akọwa site na usoro ndị a na Androidsis.
TOP 4 Egwuregwu nkịtị. Egwuregwu ndị dị mkpa igwu egwu ebe ọ bụla
Taa, anyị na-ewetara gị Egwuregwu Egwuregwu TOP 4 a, egwuregwu anọ na-enweghị isi ị gaghị echefu na njedebe gam akporo gị.
Otu esi eme ka WhatsApp gụọ ozi gị n'olu dara ụda. (Ma ọ bụ ngwa ọ bụla)
Taa, anyị kwadoro ngwa nke ka dị na steeti beta nke anyị ga-eji nweta WhatsApp iji gụọ ozi gị n'olu dara ụda dịka ngwa ọ bụla awụnyere na gam akporo gị.
'Sdị dị ọcha nke Sony na 'Concept for Android' na-aga Marshmallow wee rute mba ndị ọzọ
'Echiche maka gam akporo' ka emelitere na Marshmallow iji ruo ọbụna ọtụtụ mba na ihe ruru 10.000 beta testers ndị nwere Xperia Z3 na Z3 compact.
Akụkọ ifo site na ihe omume Borderlands, enwereghị Play Store
Akụkọ ifo site na Borderlands site na TellTale Games bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka gam akporo. Ugbu a maka n'efu ihe mbụ ya
Lollipop adịworị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime ngwaọrụ gam akporo anọ
A na - achọta gam akporo 5.0 Lollipop n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime ngwaọrụ gam akporo anọ dịka ọnụọgụ ọhụrụ Google nyere.
Ngwa kacha mma nhazi ụda olu maka gam akporo
Taa m na-ewetara gị ihe kacha mma olu equalization App maka gam akporo, ngwa nke gị na ndị enyi gị ga-eji chịa ọchị.
Ngwa kacha mma iji chekwaa batrị na gam akporo
Taa, m na-ewetara ihe maka uto m bụ ihe kacha mma iji chekwaa batrị na gam akporo.
Nke a bụ otú gam akporo si gbanwere gam akporo 6.0 Marshmallow
Na-erite uru nke nsụgharị na-adịbeghị anya nke gam akporo 6.0 Marshmallow anyị na-eme nyocha nlele nke nsụgharị niile nke gam akporo kemgbe ọ dị
Oge, ihe ọhụrụ sitere na Twitter iji wetara anyị ụdị ọnọdụ dị ugbu a na onyonyo
Twitter weputara ihe ohuru akpọrọ "Obere oge" nke anyị nwere ike iji nweta ihe kachasị amasị anyị na ntanetị mmekọrịta a site na onyogho.
[APK] Telegram emelitere na mbipute 3.2.3 na ndozi Marshmallow
Telegram emelitere iji weta ihe atọ dị oke mkpa dị mkpa site na Marshmallow: Ntanye aka, Google Ugbu a na Mgbata, na nkwado mkpịsị aka.
Enwere m ike ịhapụ ekwentị na-akwụ ụgwọ n'abali ọ bụla?
You bụ otu n'ime ndị ọrụ na-ahapụ ha gam akporo odori niile abalị? Anyị na-agwa gị ma ọ bụrụ na ọ dị mma ma zie ezie ịkwanye ya dịka ị na-eme.
Ngwa igwefoto 10 kacha mma maka gam akporo
Ngwa 10 nke sitere na nhọrọ efu, dakọtara maka gam akporo 5.0 API ọhụrụ, edezi foto ma ọ bụ iji nweta selfies kachasị mma.
Adobe wepụtara Illustrator Draw and Capture CC na gam akporo
Adobe na-ebupụta ngwa abụọ na Storelọ Ahịa Play iji welie imepụta na okike site na mkpanaka gam akporo na Illustrator Draw and Capture CC.
Android 6.0 rutere na Nexus 5, 6, 7, 9 na Player site na OTA na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ngwaọrụ Nexus nwere ike nweta ugbu a nbudata akwụkwọ ntuziaka nke OTA maka mmelite ha gam akporo 6.0 Marshmallow.
A na - ehichapụ ndepụta ọhụrụ na ọnụahịa ndị ga - enweta gam akporo 6.0 Marshmallow: ee, a ga - emelitekwa Galaxy S5
A na-edepụta ndepụta na-egosi ekwentị site na ndị nrụpụta ga-enweta Android 6.0 Marshmallow na afọ niile.
Budata ma wụnye TWRP na Xiaomi Redmi Rịba ama 2
Taa, anyị na-egosi gị usoro otu esi etinye TWRP na Xiaomi Redmi Rịba ama 2.
Etu ị ga - esi melite Xiaomi Redmi Rịba ama 2 na Miui V7 ma gbanye ya
Taa, anyị na-egosi gị otu ị ga - esi melite Xiaomi Redmi Rịba ama 2 na Miui V7 wee gbanye ya ozugbo na otu usoro ahụ ma chekwaa akwụkwọ ikike nke ụlọ ọrụ.
TUFFS ewe ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala na ngosi panel nke gị mobile
TUFFS bụ ngwa ọhụrụ nke na - enye gị ohere iwere ngwa ndị kachasị amasị gị na ngalaba ngosi nke gam akporo ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị.
Peggo maka gam akporo na-atụgharị Soundcloud na YouTube na ọdịyo maka nkwụghachi azụ na-adịghị n'ịntanetị
Peggo for Android bụ ngwa na-abịa site na desktọọpụ kọmputa gị ka ịdekọ ụda site na Soundcloud na YouTube.
Google Nọgidenụ, ikekwe ihe kachasị mma edeturu gam akporo
Ndozi Google nọ na-aga n’ihu na-enye ihe kachasị mma nke ihe ị ga-eme na ndetu ngwa ngwa yana atụmatụ dị elu
Blockquest, RPG ụlọ akwụkwọ ochie nwere ụdị ọhụ ụzọ Crossy Road
Blockquest bụ obere ihe dị egwu anyị chọpụtara taa site na Androidsis na nke ahụ ga - enyere gị aka iji RPG na ụdị ọhụụ
Disney Infinity Toy Box 3.0, mepụta ihe omuma igwu egwu gi kariri ihe odide 80 i nwere
You nwere ike igwu egwu ruo ihe dị iche iche dị iri asatọ na Disney Infinity Toy Box 80, igbe aja ebe ị nwere ike ịmepụta ahụmịhe egwuregwu gị.
Etu esi melite Xiaomi Redmi Rịba ama 4G na Miui V7 Android 5.0.2 official
Taa, m na-egosi gị otu esi emelite Xiaomi Redmi Rịba 4G na Miui V7.
LG mmelite na gam akporo 6.0 Marshmallow
Na ndepụta dị mkpirikpi nke mmelite LG na gam akporo 6.0 Marshmallow, a na-akọkwa banyere LG G2 ọzọ, nke ọtụtụ ndị na-ewere dị ka otu n'ime ihe kacha mma gam akporo nke ọtụtụ mba rụpụtara na akụkọ ntolite ya.
Egwuregwu Egwuregwu EA Games na-alaghachi na Mkpa Ọsọ: Enweghị Nkwụsị
Mkpa maka Ọsọ: Enweghị oke bụ egwuregwu vidiyo nke emepụtara maka ekwentị mkpanaaka nwere ọnọdụ ịkwụ ụgwọ obere ego.
Official Motorola mmelite gam akporo 6.0 Marshmallow
Ndị a bụ ọnụ ahịa ndị nwere ike ịgụnye na ndepụta nke nwelite Motorola mmelite na gam akporo 6.0 Marshmallow
Official Sony mmelite na gam akporo 6.0 Marshmallow
Ndị a bụ ndị ahọpụtara maka ebube na ndepụta Sony nke mmelite gọọmentị na gam akporo 6.0 Marshmallow.
Ski Safari laghachi na ekwentị gị na Ski Safari 2
Egwuregwu kachasị mma abịaghachila na Ski Safari 2 na ya, jumps, cartwheels na atụmatụ ndị ọzọ mere ka ọ bụrụ onye ama ama n'akụkụ nke mbụ ya.
Steam na-enweta nnukwu mmelite na 2.1: ihe eji azụ ahịa, egwuregwu egwuregwu, nyocha na ọtụtụ ndị ọzọ
Steam nwere ike ikwu na ọ nwere nhọrọ niile na ụdị desktọọpụ na nsụgharị ọhụrụ 2.1.
Official Samsung mmelite gam akporo 6.0 Marshmallow. Samsung Galaxy S5 na-ahapụ
Ndị a bụ ndị ọrụ gọọmentị Samsung mmelite na gam akporo 6.0 Marshmallow, ndepụta nke ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ mba ụwa Korea na-ezube imelite gam akporo 6.0 Marshmallow
DAEMON Sync na-enye gị ohere ịmekọrịta faịlụ site na netwọk Wi-Fi mpaghara gị
DAEMON Sync na-ewetara anyị ahụmịhe DAEMON Ngwaọrụ maka ọrụ gam akporo maka mmekọrịta mmekọrịta site na otu netwọk Wi-Fi
Stagefright, nsogbu dị egwu nke gam akporo, dakwasịrị ọzọ
Site na Zimperium ha achọtala sọftụwia gam akporo ọhụrụ nke na - eji uru ọbá akwụkwọ nke multimedia gam akporo site na ịlele faịlụ ọdịyo
Gam akporo Auto ga-amalite ịbata na 2016 na ụdị GMC
Gam akporo Auto ga-amalite ibata na 2016 na United States na ụdị mbụ nke ndị nrụpụta GMC.
[APK] Download ugbu a mbipute ọhụrụ nke Google Photos na nkwado Chromecast na mkpado ndị mmadụ
Taa, anyị na gị niile kerịta ọhụụ ọhụrụ nke Google Photos n'ụdị APK maka nhazi akwụkwọ ntuziaka maka ya tupu ọbịbịa ya na Storelọ Ahịa Play.
Virkpụrụ omume na uru nke gam akporo 6.0 Marshmallow
Gam akporo 6.0 Marshmallow nwere atọ anyụike dị ka isi ya fundamentals: Google na Kpatụ, ukwuu akara na mma batrị arụmọrụ.
Ndị a ga-abụ Nexus nke a ga-emelite na gam akporo 6.0 Marshmallow
Google ekwuputala na Nexus 5, 6, 7, 9 na Nexus Player ga-enweta Android 6.0 marshmallow na izu na-abịa.
Soro ihe ngosi Google na-ebi na ahịrị 0 (Gụgharia) ma mara ozi niile sitere na Google
N'ebe a, anyị hapụrụ gị nkwupụta nke ngosi Google ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya ibi ebe ọ bụla ịchọrọ.
Google Pixel C ga-abụ mbadamba gam akporo na 10,2 ″, keyboard na gam akporo Marshmallow
Google Pixel C ga-eji dochie Chromebook Pixel ma ga-abịa na 10,2 "ihuenyo, ihe mgbawa NVIDIA X1 na 3GB RAM
Hazie Samsung Galaxy gị na gburugburu 57
Hazie Samsung Galaxy gị na isiokwu ọhụụ 57 ndị Samsung gbakwunyere na ụlọ ahịa ya.
M ga-enwe ike imelite ekwentị m na gam akporo 6.0 Marshmallow?
Android 6.0 Marshmallow ga-abata echi na Nexus ọhụrụ, mana ị ga-enwe ya na mkpanaka gị?
Pulsar, onye egwu egwu n’efu na - eweputa ndetuta egwu ọkpụkpọ
Pulsar bụ kpam kpam free music ọkpụkpọ na ị pụrụ n'anya ya smart listi ọkpụkpọ na ihe Design
New Huawei 6P leak na-akwado ụfọdụ nkọwa ya: batrị 3.450 mAh na ahụ igwe
Site na ikike mara nke batrị Huawei 6P, a na-atụ anya nnukwu nnwere onwe ga-enwe ike iru ụbọchị ma ọ bụ karịa karịa na-enweghị ịkwụ ụgwọ
Litron, egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke ndi ochie nke iri asatọ na iri iteghete dere
Litron bu ihe eji emeghari anya nke ndi XNUMX na ninties nke ghoro gi nke oma nke egwuregwu ya.
Ọ bụrụ na ị gbanyere mkpọrọgwụ, Android Pay will not work Chọpụta ihe kpatara ya!
Ngwaahịa ọhụrụ nke ga-anọchi Wallet kwere nkwa ịgbanwe ọtụtụ ihe na ụwa gam akporo. Mana, Google Pay agaghị adakọ na ọdụ ndị gbanyere mkpọrọgwụ.
Eluigwe, ihe mgbagwoju anya dị ka egwuregwu vidiyo ebe jumps na-ewere nnukwu mkpa
Eluigwe bụ mgbaghoju anya na ọtụtụ ọkwa na ụdị ọhụụ na-adọta uche site na egwuregwu mbụ. Egwuregwu vidiyo pụrụ iche na n'efu.
Cyanogen na-enye nkwado Moto G na Moto E ugbu a
Cyanogen ka kwupụtara na Moto G na Moto E ga-enwe nkwado gọọmentị maka ROMS ha
Achọrọ m antivirus na gam akporo? Azịza nye nde dollar
Antivirus na gam akporo nwere ike ịbụ ngwa ọrụ zuru ezu maka nchekwa gị. Mana ha ga-enwerịrị ngwa?
Bụrụ Arsene Wenger na Champ Man 16
Onye Ọchịchị 16 na-atụ aro ka ọ bụrụ onye nkuzi bọọlụ ịbanye na ọgbakọ kachasị mma na mbara ụwa.
FIFA 16 Ultimate Team, ikekwe egwuregwu bọọlụ kachasị mma n'oge a
FIFA 16 Ultimate Team bụ ọhụrụ mbipụta nke a na-ewu ewu football saga na-abịa na ihe na-akpali kaadị mode ịgbanwe kpakpando Player
Etu esi eme ka ihe oyiyi di na gam akporo
Taa, anyị na-akwado Photo Resizer HD, otu n'ime ngwa ole na ole maka gam akporo nwere ike ịmegharị ihe onyonyo n'ọtụtụ ụzọ yana n'efu.
Otu esi egbochi oku na SMS na ọnụahịa gam akporo gị
Taa, anyị n’egosi gị ngwa eji akwụ ụgwọ nke ga - enyere anyị aka igbochi oku na SMS na android.
Bluboo XFire, ama nwere mgbawa 64-bit, Android Lollipop 5.1 na 4G maka euro 55
Bluboo XFire bụ ọnụ ndị China nke na-abịa na nkọwa anyị nwere ike ịsị na ọ nweghị atụ maka ọnụahịa o nwere, ọ dịghị ihe karịrị euro 55.
Ọrụ Google Play na-akwado maka mbata Marshmallow yana mmelite na APIs
Android 6.0 Marshmallow ga-anọnyere anyị na ụbọchị ma nke a pụtara na Google Play Services 8.1 dị n'ihu mbata ya.
A gam akporo 6.0 Marshmallow na Nexus 5 na 6 dika nke October 5
Nwelite ohuru ohuru nwere ike ibia site na October 5 ozo nke Nexus 5 na Nexus 6.
Microsoft weputara otu Outlook na Android dika ihe nke Office 2016
Otu Outlook dị iche iche bụ ngwa Microsoft ọhụrụ nke so na Office 2016 ọhụrụ ahụ yana nke ahụ chọrọ ka ị nweta ndenye aha Office 365 maka ojiji ya
Akwụkwọ ahụaja Storelọ Ahịa Google na-eme ememme 7 nke gam akporo
Storelọ ahịa Google na-ekenye usoro akwụkwọ ahụaja iji mee mmemme afọ 7 nke gam akporo wee si na ọnụ ọgụgụ nke nsụgharị ndị anyị na-enweta
Khan Academy bụ usoro mmụta mmụta n'ịntanetị nke ị nwere ike isi mụta ọtụtụ ụdị isiokwu dị ka sayensị, ego ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Taa, anyị na-egosi gị otu esi agbanwe mkpebi nke onyonyo site na njedebe nke gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Gam akporo Atọ: Olee otú ibudata ọdịnaya kwadoro na Mega enweghị nwere gam akporo ngwa arụnyere
Taa, anyị na - egosi gị ụdị aghụghọ a dị mfe nke ga - enyere anyị aka ibudata ọdịnaya ejiri na Mega na - etinyeghị ngwa gam akporo.
Safedownloadapps, mgbasa ozi iwe na-awakpo ekwentị anyị na mbadamba
Safedownloadapps bụ malware ma ọ bụ nje dị ike nke abanyela na Google site na Adsense, ngwa ọrụ ya maka itinye mgbasa ozi na ibe weebụ.
Taa, anyị na-akọwa otu esi etinye akara mmiri na foto site na njedebe nke gam akporo anyị n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe yana ngwa n'efu.
Akwụkwọ ntanetị, ngwa kacha mma iji nweta nseta ihuenyo nke ibe weebụ
Taa, anyị na-ewetara gị Web Scrapbook, ngwa kachasị mma iji nweta screenshots nke ibe weebụ.
Etu ị ga-esi bulie ọsọ nke Chrome, ihe nchọgharị weebụ nke Google
Taa, anyị na-egosi gị aghụghọ nke ga - enyere anyị aka ịbawanye ọsọ nke Chrome na ụdị ya niile.
Kacha nta Todo, a free ngwa na ihe Design iji jikwaa nile di iche iche nke ihe aga-eme na-eme anatara
Na-edekọ ihe niile ọrụ na ihe ị ga-eme n'ụbọchị ahụ na Minimal Todo, ngwa ngwa ihe eji emepụta ihe n'efu.
[APK] Download ọhụrụ version nke Google Elekere na nwayọọ nwayọọ na-abawanye na mkpu olu na ndị ọzọ
4.2.dị XNUMX nke ngwa elekere Google na-enweta ike iji nwayọ mụbaa olu mkpu ma gbanwee ụdaolu na ngụ oge.
Omate na-ewepụta TrueSmart ọhụrụ ya nke na-arụ ọrụ na Android 5.1 Lollipop
Omate TrueSmart + bụ ihe a na-eyikarị nke nwere njirimara zuru ezu nke gam akporo Lollipop na ịgafe gam akporo Wear.
[MOD] Otu esi etinye ihe ndozi Xperia Z5 na Android Lollipop
Taa, anyị na-egosi gị otu esi etinye ntinye nke Xperia Z5, ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ọtụtụ mba Japan.
Dịkwuo ọsọ nke gam akporo gị site na deactivating animations. Akụkọ ifo ka ọ bụ Eziokwu?
Ọ nwere ike ịbawanye ọsọ nke gam akporo gị site na deactivating animations?. Anyị na-agwa gị eziokwu niile na ihe ọ bụla mana eziokwu banyere akụkọ ifo a.
ANDROID MARA !! Ghost Push: ndepụta nke ngwa niile na ogwu
Taa, anyị na-ewetara gị ndepụta nke ngwa ọgụ Ghost Push tinyere ogwu na ọgwụ mgbochi.
[WhatsApp Atọ] 2 tozọ ndabere WhatsApp
Taa na nkuzi ohuru a anyị na-egosi gị ụzọ 2 iji kwado WhatsApp.
Shades, ma ọ bụ ihe ga-abụ tiori nke agba etinyere Tetris
Shades bụ egwuregwu yiri Tetris na nke agba dị oke mkpa iji nọgide na-aga n'ihu ma na-enweta isi ihe
Evolution Planet, mepụta ma gbanwee ụdị ihe okike ọ bụla na ihe egwuregwu a
Evolution Planet bụ Arcade ebe anyị nwere ikpokọta ihe atọ e kere eke ka ha wee wepụta nke ọzọ wee si otú a dozie ọkwa niile.
HOMTOM HT6, Smartphone ọhụrụ Doogee nwere nnukwu batrị 6250 mAh nke na-ekwe nkwa ụbọchị 3 na-enweghị akwụ ụgwọ ya n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ
Doogee na-agwa anyị maka mwepụta nke HOMTOM HT6, ọnụ ahịa ọhụrụ nke na-abịa n'okpuru akara ngosi nwere nnukwu batrị 6250 mAh nke kwere nkwa nnwere onwe dị ukwuu.
Akwụkwọ Ọzụzụ: Rush, onye na-agba ọsọ na-enweghị njedebe na ụdị eserese pụrụ iche
Akwụkwọ Trainzụ akwụkwọ: Rush bụ onye na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ nke na-apụ apụ maka ụdị ụdị ya na ezigbo ọdịnaya iji nwee ọ enjoyụ maka oge.
&Tụ & Ọgba aghara 2: Mgbapụta, ezigbo MMO si Gameloft kwụ ọtọ na ihuenyo ekwentị gị
Iwu & Ọgbaaghara 2: Mgbapụta bụ nzọ ohuru Gameloft maka ụdị MMO na gam akporo, yabụ ị gaghị echefu ya.
Office Lens, nye m otu kacha njọ Android Scanner Apps
N'ime ngwa nyocha nke gam akporo, na enweghi obi abụọ na uche m mgbe niile, Office Lens bụ otu n'ime ngwa nyocha kacha mma nke gam akporo m nwere ike ịnwale na gam akporo m ma ọ bụ ya mere m ji kpebie igosi gị ụzọ ọzọ m ga - enweta na Office Lens .
Budata akwụkwọ ahụaja Androidsis n'efu iji gosi ha na gam akporo gị
Taa, anyị hapụrụ gị ole na ole na akwụkwọ ahụ aja na Androidsis motifs, ya bụ, Androidsis na akwụkwọ ahụ aja.
Egwuregwu vidio isii ọhụụ na-enweghị ike ịnwe na NVIDIA Shield gị
NVIDIA Shield na ọgbọ nke atọ ya bụ usoro ikpo okwu iji nweta egwuregwu kachasị mma na gam akporo dịka Hotline Miami 2.
[Ihe aghụghọ WhatsApp] Otu esi amata onye gụrụ ozi na otu WhatsApp
Taa ka anyị wetara gị aghụghọ WhatsApp a iji chọpụta onye gụrụ ozi na otu WhatsApp.
Etu ị ga-esi chebe akaụntụ WhatsApp gị
Taa, anyị n’egosi gị etu ị ga-esi chedo akaụntụ WhatsApp gị ka o chebe ya pụọ ​​n’ọchịchọ ịmata ihe.
Nje virus nke nwere ike ịgbanwe PIN nke gam akporo gị
Na ANDROID ALERT anyị na-agwa gị banyere nje ọhụrụ nwere ike ịgbanwe PIN nke ọnụahịa gam akporo gị.
Gam akporo hack: olee ngwa ngwa nweta niile anyị na-agụghị ozi ịntanetị
Taa, anyị na-akọwa atụmatụ aghụghọ nke gam akporo, ma ọ bụ karịa nke Gmail nke ga-enyere anyị aka inyocha ozi ịntanetị anyị niile a na-agụghị.
Onye ọrụ na-achịkwa ịgafe mkpọchi mkpanaka na Lollipop n'amaghị PIN ma ọ bụ koodu ahụ
Otu onye ọrụ achọpụtala ọtụtụ nsogbu nke metụtara PIN ma ọ bụ paswọọdụ nchebe na-egbochi gam akporo Lollipop.
Egwuregwu gam akporo: Otu esi enweta Egwuregwu Zoro ezo nke Chrome maka gam akporo
Taa, anyị na-akọwara gị na aghụghọ a gam akporo, otu esi enweta egwuregwu zoro ezo nke Chrome maka gam akporo.
Etu ị ga-esi ghahie ọnọdụ nke ọnụ ahịa gam akporo anyị
Taa, anyị na-ewetara gị otu aghụghọ gam akporo iji mebie ọnọdụ nke ọnụ anyị.
[APK] Budata ugbu a ụdị ọhụụ nke Nova Launcher na akara ngosi normalization
Nova Launcher na-ewetara anyị atụmatụ nke na-eme ka atụmatụ nke drawer ngwa ahụ dịkwuo mma site na ịhazigharị nha ya na ịgbanwe ya ịgbaso iwu.
Ihe obula ichoro ima banyere Photoshop Mix bu ihe nkpuru ihe di egwu
Taa, anyị na-egosi gị otu esi eji ihe ngosi Photoshop Mix cropping tool, nke m bụrịrị ihe dị mkpa na ngwa m na gam akporo.
Etu ị ga - esi nwetaghachi ọrụ furu efu na Kit Kat inwe ike ịwụnye ngwa na MicroSD
Taa, anyị na-egosi ụzọ dị mfe iji weghachite ọrụ furu efu na Kit Kat iji nwee ike ịwụnye ngwa na MicroSD.
[APK] Download RouterKeygen na usoro eji eji igodo WiFi
Taa, anyị na-egosi gị otu esi ebudata RouterKeygen site na saịtị echekwara yana usoro ntinye na ụzọ ziri ezi iji RouterKeygen.
Taa, anyị n’egosi gị ụzọ ziri ezi iji budata ma wụnye Photoshop Mix na Tablet gam akporo.
Taa, anyị na-egosi gị otu esi egwu Nintendo Super Mario Bros mbụ na gam akporo gị, oge a, na-atụ aro emulator kacha mma NDS maka gam akporo, na-enye gị Rom nke egwuregwu mbụ ahụ ma kụziere gị otu esi eji emulator.
Etu esi eji mkpisiaka aka iji nweta netwọkụ mmekọrịta
Ọ bụ ezie na onye na-agụ akara mkpịsị aka adịghị oke ebe niile, anyị na-akọwa otu esi eji ya nke ọma ma jiri ya mata onwe gị na weebụsaịtị dị iche iche.
Otu esi emepụta vidiyo na-atọ ọchị nke puppy puated na ihu gị
Taa, anyị n’egosi gị otu esi emepụta vidiyo na-atọ ọchị nke puppets puated na ihu gị na-eme omume dị iche iche nke ị na-amalite ịchị ọchị.
Etu esi etinye akwụkwọ ahụaja dị iche iche na ibe desktọọpụ ọ bụla
Anyị na-akụziri gị, site na ngwa ndị ọzọ, otu esi etinye akwụkwọ ahụaja dị iche iche na ibe desktọọpụ na gam akporo.
7 nke ngwa kachasị mma maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ
Site na ngwa ngwa 7 a, ike ịghọta ma ọ bụ ọbụlagodi ịmụ asụsụ ga-agba ume maka ụmụaka ma ọ bụ ụmụaka nọ n'ụlọ.
Ebumnuche physics na egwuregwu dị ka ihe ngọcha kachasị mma iji nwee anụ ọhịa na Zombies 3 nzuzu
Zombies dị nzuzu 3 bụ egwuregwu vidio nke nwere physics dị ka etiti nke egwuregwu egwuregwu nnụnụ Angry.
Nexus ohuru ohuru gafere FCC
Google nwere ike iweta n'oge ihe omume na-esote na Septemba 29, ọgbọ ọhụrụ nke Nexus Player.
Nibblers bụ nzọ ọhụrụ Rovio na ụdị nke Candy Crush
Nibblers bụ egwuregwu vidiyo ọhụrụ Rovio nke na-akpọrọ anyị n'ihu igwe egwuregwu dị ka Candy Crush na ọtụtụ egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ.
Nova Launcher na-emelite iji weghachite akara ngosi iji dakọtara
Ọ bụrụ na ihe ejiri mara Android bụ nhazi ya. Ekele maka nnwere onwe nke sistemụ arụmọrụ nke ...
1000 Gb nke nchekwa igwe ojii n’efu na QuickPic
QuickPic na-enye anyị 1000 Gb nke igwe ojii nchekwa na-akwụ ụgwọ nwere nsụgharị kachasị ọhụrụ dị.
Etu esi lelee Atlético de Madrid VS FC Barcelona n'efu
Twozọ abụọ iji lelee Atlético de Madrid VS FC Barcelona n'efu na gam akporo ma ghara ịnwụ ịnwa.
MicRogue, jiri mma agha na ọta gị gbagoo n'ụlọ elu gbara ọchịchịrị
MicRogue na-akpọrọ anyị gaa ebe a na-egwu mkporo, ma yana ọdịmma ndị ọzọ na ụdị egwuregwu iji mee ka anyị nwee ike ịme egwuregwu.
Ka ike diri gi na Star Wars: mgbanwe
Star Wars: Mgbanwe bụ akụkụ ọhụrụ nke akụkọ akụkọ sayensị sayensị nke anyị ga-enwe ike ịbụ akụkụ nke eluigwe na ala George Lucas
Mepụta ndetu ndenye na Shortzọ mkpirisi ụzọ na Ncheta Memo
Ihe ncheta Memo bu ngwa di egwu nke oma iji meputa ihe ngwangwa ma mezie ha na ogwe onodu ma obu omume n’ime ha ka ha weputa udiri ngwa nile.
Egwuregwu 64 - Super Max Adventure, ma ọ bụ ihe ruru otu ihe site na ikike Nintendo, Super Mario Bros maka gam akporo na-enweghị mkpa ịwụnye emulator ọ bụla.
Hazie nghazi ihuenyo maka ngwa ọ bụla na Swivel for Android
Swivel bụ ngwa ọhụụ na - enye gị ohere ịhazi nghazi maka ngwa ọ bụla, nke gunyere ntuziaka.
Gam akporo 5.0 Lollipop adịworị na 21% nke ngwaọrụ ndị banyere na Playlọ Ahịa Play
Android Lollipop dị ugbu a na 21 pasent nke ngwaọrụ ndị na-abanye na Playlọ Ahịa Play kwa ọnwa maka nbudata ọdịnaya multimedia
[APK] Opera Mini emelitere yana mmelite na mkpakọ data
Versiondị ọhụrụ a na-eweta mkpakọ data dị mma nke pụtara na anyị na-echekwa megabytes ole na ole oge ọ bụla anyị ji ya nyochaa
Na ndị na-esonụ post m na-egosi gị na-enyemaka nke a video, otú mgbọrọgwụ gị gam akporo na enyemaka nke KingRoot.
Etu ị ga-esi enweta ọkwa mgbe ngwa ma ọ bụ egwuregwu vidio dị na gam akporo natara ego
Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi enweta ọkwa nke ire ngwa na egwuregwu vidio na ngwa nke na-arụ ọrụ dị ka amara.
Sony weputara 5.1.1 OTA gam akporo Lollipop XNUMX OTA maka Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR na Xperia Tablet Z.
The Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR na Xperia Tablet Z na-enwetarịrị Android 5.1.1 Lollipop na njirimara ọhụrụ na arụmọrụ na njikwa ụda.
5 free ụlọ elu-agbachitere video egwuregwu ị ga-agbalị
Anyị na-eweta ụlọ elu vidiyo ise na-agbachitere ebe anyị na-ahụ nnukwu alaeze Rush ma ọ bụ ụlọ nche N 'Trolls.
Blocky Highway bu egwuregwu na - enweghi ngwucha ebe nile igha enweta udiri ihe egwu kacha mma.
Anyị na-egosi gị otu njikọ njikọ Bubble, ihe nchọgharị weebụ maka egosipụta mmiri
Taa, anyị n’egosi gị etu Link Bubble si arụ ọrụ, ma nke kachasị mkpa, otu esi ahazi Facebook gị iji mepee njikọ na Link Bubble.
Otu esi enweta menu gam akporo zoro ezo
Taa, anyị gosipụtara gị koodu iji nweta menu gam akporo zoro ezo.
Mee obodo n'etiti etiti zombie apocalypse na Wughachi 3: Gangs nke Deadsville
Wughachi 3: Gangs nke Deadsville bu ohuru ohuru nke Sarah Northway duru gi ka i wulite obodo n’ogbe zombie apocalypse.
The Deer God, ihe osise na pixel na arcade
The Deer God na-apụta maka ọtụtụ ihe mana n'otu ihe ịga nke ọma na ọtụtụ: nlezianya anya ya na pixel na 3D. Gaghị ida a.
Achọpụtaghị, onye ọzọ na-agba ụta site n'aka ndị okike nke Dead Trigger
Egwuregwu Madfinger na-ewetara anyị onye na-agba ụta nwere nnukwu nka teknụzụ mgbe nke ahụ gachara nke ọma Nwụrụ Anwụ.
[APK] Wifi Keygen, iji lelee nchedo nchekwa nke Easybox rawụta ma ọ bụ "zuo okwuntughe WiFi onye agbata obi anyị"
Taa, anyị kesara WiFi Keygen ngwa iji lelee nchebe nke WiFi gị ma ọ bụ "zuo WiFi paswọọdụ nke onye agbata obi anyị"
Esi lelee vidiyo na Tube tub na windo na-ese n'elu mmiri
Ihe kacha mma Tube ọkpọ ọkpọ ọkpọ, ngwa etinyere na nke izizi ma nwee ike igwu vidio vidio gị na windo na-ese n'elu mmiri, na-egwu vidiyo na ndabere ma ọ bụ na-ebudata vidiyo na ọtụtụ vidiyo na ụdị ọdịyo.
EZI na-ewetara anyị launcher ya n'akụkụ ndị a
LINE na-ebupụta launcher ya na akụkụ ndị a, nke na-egosi ngwa launcher nwere nnukwu akwụkwọ ahụ aja na ụfọdụ nhọrọ.
Gam akporo Wear bụ ugbu a dakọtara na iOS
Daybọchị abịa, Android Wear bụ ugbu a dakọtara na ngwaọrụ iOS.
ClearLock na-egbochi ngwa ịdọpụ uche maka nwa oge
ClearLock bụ ngwa ga-eme ka ị ghara ịdọpụ uche gị site na ngwa ndị ọzọ maka oge ụfọdụ. Ọ nwere njirimara pụrụ iche.
Sneak si n'ụlọ mkpọrọ na-enweghị onye ọ bụla hụrụ gị na Winter agba ọsọ
Ndị na-agba agba n'oge oyi bụ egwuregwu vidio nke na-etinye anyị n'ihu mbọ iji gbanahụ n'ụlọ mkpọrọ nchekwa dị elu.
Blitzcrank's Poro Roundup, ihe egwuregwu egwuregwu egwuregwu sitere n'aka ndị okike nke League of Legends
Ndị okike nke League of Legends, Egwuregwu Riot, wetara anyị onye egwuregwu a na-enweghị njedebe na-agba ọsọ na-akpọ Blitzcrank's Poro Roundup.
The kacha mma Lara abịarute ọzọ na njem jupụtara nke mgbagwoju anya na Lara Croft Go
Lara Croft Go bu uzo ohuru site na Square Enix iji banye n’ime obodo ochie ma weghachite ihe ndi ozo.
Nwụrụ Anwụ Nwụrụ Anwụ: Roadzọ nke vlanahụ, akụkọ mbụ sitere n'aka Kirkman na ekwentị gị
Onye Nwụrụ Anwụ Na-aga Ije: E mepụtara Roadzọ nke Nlanarị site n'enyemaka nke Robert Kirkman, onye okike nke usoro a nke ewetara na telivishọn.
IGrand na iLetric Piano ngwa maka egwu okike bidoro na gam akporo
Ngwa abụọ na-abịakwute ndị ọkachamara n'egwuregwu ndị nwere ngwaọrụ gam akporo na nkwenye nke inwe ihe ịga nke ọma na iOS.
Twitter ka kwuputara ihe ọhụụ nke inwe ike pin otu tweet na profaịlụ gị na gam akporo na iOS.
Google na - emeziwanye nsonaazụ ọchụchọ maka ngwa sitere na Google Ugbu a ma ọ bụ wijetị ogwe ọchụchọ.
Otu esi amata ma Certifi-Gate metutara anyi
Taa, anyị na-akọwa otu esi amata ma Certifi-Gate metụta anyị yana otu esi eme ihe banyere nnwale dị mma.
Taa, anyị na-ewetara BackPackTrack II, ngwa na-akpali akpali na mgbakwunye na ịdekọ ọnọdụ gị na-enye gị ohere ịnakọta data dịka ịdị elu, usoro njem ma ọ bụ ogologo njem na njem gị ma ọ bụ njem gị.
AKWERKWỌ NDRO NA-EME !!: Certifi-Ọnụ azọ ,má, ọhụụ ọhụrụ dị ize ndụ maka gam akporo nke ga-emetụta ọtụtụ nde ndị njedebe
Na ọhụụ ANDROID ọhụụ !! Anyị na-adọ gị aka na ntị maka nsogbu ọhụụ maka gam akporo akpọrọ Certifi-Gate
Ngwa ngwa ngwa batrị nke nwere ike ịnwụ na ndụ nke ngwaọrụ ahụ
Teknụzụ electrolyte ọhụrụ siri ike nwere ike ibute batrị nke nwere ike ịdịru ndụ
Ọgbụgba ọhụụ 'Nnukwu Ntugharị' dị ugbu a na Hearthstone
Hearthstone etinyela onwe ya dị ka otu n'ime egwuregwu vidio kachasị mma anyị nwere na gam akporo ugbu a.
Ngwa chọọ faịlụ, kọntaktị na ngwa ọdịnala na ama gị na Andro Search
Andro Search bụ ngwa ọhụụ na - enye gị ohere ịme nyocha ngwa ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba nkume n'efu.
Sụgharịa na mbipute ya nke 8.0 na-enye mgbagọ maka ọkwa ọkwa Isi na gam akporo
A na-emelite Floatify na mbipute 8.0 nke na - eme ka ọkwa ọkwa isi dị na gam akporo 5.0 Lollipop.
Batrị ọhụrụ nwere nnwere onwe nke otu izu
Batrị ndị nwere ikike ịchị nke otu izu adịworị adị ma nwee ike ịgbanwe ụwa nke teknụzụ mkpanaka
Nnukwu anụ mmiri Na-eri My Metropolis, bibie obodo ahụ site na mmali na oke na oke egwu
Nke a Monsters Rịọ m Metropolis bụ banyere nnukwu anụ, oge a na-apụghị ikweta ibibi obodo niile nke ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Egwuregwu vidiyo nke Zuma na Kittenball Prince
Kittenball Prince na-akpọghachi anyị na 2003 gaa egwuregwu vidio a na-akpọ Zuma na nke ahụ nwere ọtụtụ ihe ọokedụ itụ na ya.
Onye na-ese katuunu, onye na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ nke nwere ụdị onye na-agba ọsọ dị ka onye bụ isi
Onye na-agba ọsọ katun bụ ezigbo egwuregwu na-agba ọsọ na-enweghị njedebe nke anyị ga - enyere onye na - eme njem aka ịgafe ọtụtụ ọkwa.
Chọpụta ụwa ọhụrụ na mbara ala ndị dị n'okporo ụzọ nke Luma
Roadzọ aga Luma bụ egwuregwu vidio nke anyị ga-ebumnobi ichekwa mbara ala ndị na-eche mgbanwe ihu igwe.
Kaboom na-enye gị ozi na-ebibi onwe gị ịkọrọ onye ọ bụla
Kaboom pụtara na ọrụ ndị ọzọ n'ihi na ọ chọghị ka onye nata ya debanye aha ya iji nweta ozi na-ebibi onwe ya n'oge.
Ọ dị mfe ịkọghe ụkpụrụ ị na-eji na gam akporo ekwentị?
Ọmụmụ ihe nke nwa akwụkwọ Norwegian na-egosi anyị amụma nke usoro mmeghe anyị na-eji na ekwentị gam akporo.
Gị gam akporo ekwentị ọzọ agaghị enwe ọtụtụ ngwa Google etinyegoro
A na-etinyezi bloatware n'onwe ya n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ekwentị, ugbu a obere ngwa Google ga-abata na ọnụahịa gam akporo ọhụrụ gị.
PAC-MAN 256, egwuregwu na-enweghị ngwụcha site na ndị okike nke Crossy Road mana ọ bụ ezigbo kpochapụwo
PAC-MAN 256 bụ egwuregwu vidiyo ọhụrụ sitere n'aka ndị okike nke Crossy Road ma ọ sitere na Namco Bandai wetara anyị nke kachasị mma.
A na-emelite Wear gam akporo na ngalaba mmekọrịta
Sistemụ arụmọrụ Google emere maka wearables, gam akporo Wear, emelitere na nsụgharị 1.3. Ọ na-eweta ọtụtụ ndozi dị ka ngalaba mmekọrịta.
Google Ugbu a Launcher nwere ọhụụ ọhụrụ nke na-abịa site na nlele nke atọ maka ndị mmepe gam akporo 6.0 Marshmallow.
MIUI 7 gosipụtara beta ROM zuru ụwa ọnụ maka August 24
E nyere ndị ọrụ MIUI ọrụ Hugo Barra ka ha chee ụdị 7 nke mkpuchi mkpuchi ama ama a nyere ọtụtụ ndị nrụpụta a.
Download gam akporo Marshmallow na akwụkwọ ahụ aja na wụnye ya buut animation na gị gam akporo ngwaọrụ
Gam akporo Marshmallow bu nsonye 6.0 nke ekpughere ụnyaahụ na nke nwere mmalite nke nlele nke atọ
Android 6.0 Marshmallow bụ onye ọrụ
Ọ bịarutere, ọ bụ ọrụ. A ga - akpọ ụdị ọhụrụ nke gam akporo Androdi 6.0 Marshmallow dị ka Google n'onwe ya kwupụtara.
Surlanahụ ala ịkpa ahụ na ijikwa ebe nchekwa nuklia na Fallout Shelter
Bethesda's Fallout Shelter na-eme ka ị banye na njikwa nke ebe nchekwa nuklia ebe, na mberede, ị nwere ike ịhapụ ndị bi na ya.
QKSMS, ngwa maka ozi SMS nke na-aghọ n'efu na isi mmalite
QKSMS bụ ngwa mepere emepe na ngwa anaghị akwụ ụgwọ maka ijikwa ozi SMS gị niile n'ụzọ kachasị mma.
Sling Kong, egwuregwu vidio na-atọ ụtọ nke nnukwu nrụpụta ga-ejide gị
Sling Kong bụ otu n'ime egwuregwu egwuregwu pụrụ iche maka gam akporo nke na-echetara anyị Nnụnnụ Iwe ma ọ bụ Bee eriri.
Lụọ ìgwè ndị mmụọ nke Oké Ifufe na ụgbọ oloko
Oké ifufe na ụgbọ oloko nwere na-eme gị video egwuregwu n'ọbá akwụkwọ dị ka oké Arcade nke oké talent na àgwà. Otu n'ime ndị ga-haves.
Kaadị iri ari, a pụrụ iche kaadị egwuregwu na-agwakọta solitaire na-alụ ọgụ nnukwu anụ
Kaadị iri ari mixes ihe ga-abụ onye naanị nke a ndụ na a ụdị Anwansi nke atherchịkọta. Nnukwu nzọ maka oge okpomọkụ a.
Lolọ nchekwa Fallout, wulite ụlọ nchebe nuklia gị na Bethesda
N'ikpeazụ, terlọ nchekwa Fallout dị na gam akporo dị ka Bethesda nke mbụ na-abanye na egwuregwu vidiyo vidiyo, ị ga-atụ uche ya?
Egwuregwu vidio 9 dị elu akwụ ụgwọ ị nwere ike ịhapụ izu a
Izu abụọ gara aga anyị enweela ohere ịmụ maka egwuregwu vidiyo dị elu ana-akwụ ụgwọ.
Ekwuputara YouTube Live Broadcast ma kwadobe asọmpi megide Periscope na Meerkat
Google choro ibanye na uzo nke ihe eji ebi ndu ka i so mpi abuo nke na ewe nke ha: Periscope na Meerkat.
Etu esi wunye Lenovo Dolby Atmos na Android 4.3 ma obu elu di elu
Taa, anyị na - egosi gị usoro otu esi wụnye Dolby Atmos site na Lenvo na ụdị gam akporo 4.3 ma ọ bụ ọnụ dị elu.
ANDROID ALERT !!: Video nkeonwe, Nje Virus ọhụrụ nke ga-abanye nyere aka site na Facebook ma nwee ike imetụta ngwaọrụ gam akporo ọ bụla, Windows, Mac, Linux, wdg, wdg.
Ntị maka Nje Virus ọhụrụ nke ga-abanye nyere aka site na Facebook site na ozi nzuzo na faịlụ vidiyo agbakwunyere. Trojan dị oke egwu nke ga-achịkwa ngwaọrụ gị.
[APK] Budata nsụgharị nke Spotify maka Mbadamba ma wụnye ya na gam akporo gị
Download gbanwetụrụ Spotify ngwa maka mbadamba na-enwe ike awụnyere na gam akporo mobiles na gbanyụọ amanyere bụ iwu nke random playback.
Etu esi melite Nexus ya na ihe nchedo Stagefright
Taa, anyị na-egosi gị otu ị ga - esi melite njedebe Nexus gị na mmelite nke gụnyere Stagefright nche patch.
Kasị mma, ngwa ngwa Camera360 maka selfies
Bestie bụ ngwa nke na-agba mbọ ịkwalite selfies site na iji ngwaọrụ edezi foto.
Ekwentị gị ọ na - ekiri mgbe ịmepe foto site na WhatsApp? Anyị na-akụziri gị otu esi edozi ya
Anyị na-akụziri gị otu esi edozi otu n'ime nsogbu WhatsApp kacha mara amara. Ndị a aghụghọ ị ga-egbochi ndị mobile si nghọta mgbe imeghe a foto site na ngwa.
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ Cortana Microsoft ka ọ bụrụ onye enyemaka olu ndabara na gam akporo
Na gam akporo ị nwere ike ugbu a iji ndozi olu Cortana na ndabara na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke Microsoft wepụtara.
Otu esi eketa akaụntụ Facebook anyị na onye ezinụlọ ma ọ bụ enyi
Taa, anyị na-akọwa usoro nzọụkwụ site na usoro iji soro ketara akaụntụ Facebook anyị
Otu esi echebe onwe gị pụọ na Stragefight ma gbochie mkpanaka gị ka ọ ghara inwe nsogbu
Otu esi echebe onwe gị pụọ na Stragefight iji chebe onwe gị pụọ na nsogbu kachasị njọ ma dị oke egwu achọpụtara na gam akporo
Etu esi eweghachi WhatsApp na Google Drive ma weghachite ya mgbe e mesịrị
Taa, anyị na-ekerịta WhatsApp WhatsApp kachasị ọhụrụ ma anyị gosiri gị otu esi akwado WhatsApp na Google Drive yana otu esi eweghachi ya ma emechaa.
SPACECOM, usoro emere na interstellar sistemụ ebe ị ga-ekerịrị alaeze nke aka gị
SPACECOM na-akpọrọ anyị banye na mbara igwe iji wepụta oge egwuregwu vidiyo dị iche na nke a na-ahụ na egwuregwu ndị ọzọ.
Otu ubochi n’ime ohia, nnukwu mgbaghoju anya ma puru iche ebe igha enyere Little Little Red Red Hood aka mgbapu onwu
Zọpụta Little Red Riding Hood site na wolf na ududo iji nyere ya aka ịla n'ụlọ nnukwu A Day na Woods. Egwuregwu vidio nwere nghọta pụrụ iche nke teknụzụ.
Top Speed, gbaa ụgbọ ala gị megide ndị isi nke ndị otu ndị ọzọ
Top Speed: Drag & Fast Racing bụ nnukwu egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala nke ị ga-adaba na ndị ọzọ na ụdị ịgba ọsọ asọmpi kachasị.
Cliffy Jump, na-agbaso nzọụkwụ nke Crossy Road mana site n'echiche ọzọ
Cliffy Jump na-etinye anyị n’ihu egwuregwu vidio na-atọ ụtọ, na-atọ ọchị ma na-adọrọ mmasị, ewezuga inye anyị ohere nke ịnweta mmadụ 60 dị iche iche.
Anyị na-egosi gị otu esi agbanwe mkpuchi nke Moto G 2015 ka ọ ghara ịnwe mmiri
Anyị na-egosi gị otu esi agbanwe mkpuchi azụ nke Moto G 2015 ka ịghara ida nchebe megide mmiri wee gbanye ekwentị gị ka ọ bụrụ mpempe akwụkwọ.
Doogee na-ekwupụta Doogee Y100 Plus
Doogee ekwupụtala ekwentị ọhụrụ, ọ bụ Doogee Y100 Plus. Ọnụ nke na-eme ka ngwaọrụ Y100 dịkwuo mma ebe ọ ga-enwekwu ihuenyo na batrị
Egwuregwu vidio 7 ọtụtụ egwuregwu nwere ike igwu egwu na-anọghị n'ịntanetị
Na egwuregwu vidio 7 ndị a ịkwesighi inwe njikọ data iji nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu dị mma n'etiti ndị enyi gị.
Ihe mkpịsị aka mkpanaka gam akporo: enweghị nchebe iji tụnyere ID ID
Ihe mmetụta sensọ mkpịsị aka na-arịwanye elu na ngwaọrụ gam akporo dị elu anaghị eru ọkwa nke nche na Touch ID na-eme.
Alphabear, mgbaghoju anya mara mma nke ga enyere gi aka imeziwanye bekee gi
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inwekwu okwu iji gosi etu ị dị mma n’ Bekee, echefula oge ịhọpụta ya na Alphabear.
5 nke kacha mma na-abụghị nkịtị video egwuregwu na gam akporo
Egwuregwu vidio 5 na-enweghị nkịtị na gam akporo nke ga-ewega gị na egwu nke bard, ọgụ Orwellian ma ọ bụ atụmatụ dị ọcha.
Ngwa 4 iji wepu nko ị nwere na ama gị
Ngwa 4 ga-abara aka ijikwa mgbakwunye gị na gam akporo ekwentị. Nke a ga - eme ka ọ dịrị gị mfe ịmeghe onwe gị.
Z Steel Soldiers, a kpochapụwo nke atụmatụ laghachiri ibu na gị gam akporo ama
Usoro kachasị mma na ngwa gam akporo gam akporo Z Steel Soldiers na isiokwu ndị sitere n'ike mmụọ nsọ dị ka Blizzard's Starcraft.
5 iche iche ọduọ video egwuregwu n'ihi na gam akporo
E nwere ọtụtụ egwuregwu ịgba ọsọ na gam akporo, mana ndị anyị na-eweta na mkpọ ise a nwere ihe dị iche na ndị ọzọ.
Agar.io, egwuregwu cha cha dị egwu nke ị ga-eri ma ọ bụ rie
Ọgba aghara na-abịa na ama gị site n'aka Agar.io na nnukwu akụkụ ya nke ị ga-eche ihu ọtụtụ narị ndị egwuregwu.
6 'Egwuregwu na-adịghị agwụ agwụ' egwuregwu vidio ị kwesịrị ịnwale na gam akporo
Onye na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ bụ otu n'ime edemede ndị nwere ọtụtụ egwuregwu vidio na Storelọ Ahịa Play na nke kwụpụtara maka sekit ma ọ bụ map na-enweghị njedebe.
3 ngwa ọdịnala dị elu nke gam akporo ị gaghị ahụ na Storelọ Ahịa Play
Ngwa gam akporo 3 nke ị nwere ike ibudata n'efu na mpụga Storelọ Ahịa Play. Onye ọ bụla n’ime ha si n’ụdị dị iche.
Etu esi agbanye usoro taabụ Chrome ma gbanyụọ ya na android Lollipop
Na gam akporo Lollipop na ihe nchọgharị weebụ Chrome nwere usoro taabụ ọhụrụ anyị na-akụziri gị ka ị kwụsị ọrụ a.
MMORPG ohuru biara iji gam akporo Agbahapụ World Mobile
Ezigbo MMO iji oge ezumike a soro Forsaken World Mobile nke sitere na studio nke nwere ahụmịhe ya na ụdị PC egwuregwu a.
Miui V7 dabere na Android Lollipop ga-adị nke August a
Izu na-abịa Xiaomi na-akpọ anyị òkù maka mmemme ngosi nke ụdị ọhụrụ Miui V7 nke dabere na Android Lollipop.
Egwuregwu egwuregwu 8 kacha mma na gam akporo
Anyị nọ n'oge ọkọchị ma anyị na-achọ egwuregwu nke poker na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ sitere na ngwaọrụ mkpanaka anyị ebe anyị nwere ike ịchọta ngwa ngwa poker kacha mma.
Ihe nchọgharị weebụ abụọ dị ọsọ ọsọ na-eji obere nchekwa
Anyị na-egosi gị ihe nchọgharị weebụ abụọ na-abata na Android na ebumnuche nke iji obere ebe nchekwa na nke ahụ zuru oke maka njedebe arụmọrụ dị ala.
Turbo mkpu, a kpam kpam free mkpu elekere ngwa na ọtụtụ nhọrọ
Mkpu mkpu Turbo bụ ngwa pụrụ iche dị ka elekere mkpuchi nke nwere ike dochie nke na-abịa na ndabara na gam akporo.
Etu esi abanye Netease site na gam akporo n'onwe ya site na nzọụkwụ
Taa, anyị na-akọwa otu esi abanye na Netease site na gam akporo nke anyị na ihe na-erughị nkeji 2.
Lanarị Oké Mgbukpọ ahụ na Ọfịs Ọdachi, egwuregwu dị mfe ma na-adọrọ mmasị
Ọfịs Ọfịs bụ egwuregwu ebe lanarị ọdachi ndị na-emere onwe anyị bụ nnukwu atụmatụ anyị. Ochie na pixelated ikuku na visual.
[APK] Budata ma wụnye ụdị ọhụrụ nke ES Material Design File Explorer
Lee ị nwere ngwa ibudata ma wụnye ụdị ọhụụ nke ES Material Design File Explorer
7 ịrịba lanarị video egwuregwu n'ihi na gị gam akporo ngwaọrụ
The zombie isiokwu meriri na ndị a 7 lanarị video egwuregwu ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ndị ọzọ ịtụnanya dị ka ị pụrụ ịhụ.
4 Fitness ngwa ọdịnala nke ị gaghị echefu
N’ụbọchị ndị a, anyị ga-achọpụta na anyị kwesịrị ịna-emega ahụ́. Ngwa 4 na-abịa enyere gị aka maka ahụike
Tinycore bụ obere ngwa na-enyocha ọnọdụ nke batrị, CPU na RAM ebe nchekwa site na ọkwa ọkwa na ekwentị gam akporo gị.
Egwu jiri ehihie ise laghachi Freddy's 4
Oru ise na Freddy's 4 na-egosi anyị na ị nwere ike ịtụ ụjọ na-egwu egwuregwu vidiyo dị ka nke a na gam akporo.
Deadlock: Online, onye na-agba ọsọ egwuregwu ọtụtụ anyị mechara nwee na gam akporo
You nwere ike igwu egwu megide ọtụtụ puku ndị egwuregwu na onye na-agba ọsọ ọtụtụ egwuregwu nke batara na iOS ma kpọọ ya Deadlock: Online.
Otu Hollywood Movie Stuntman na Stuntman Stuart
Mụta ịmụ banyere ndụ onye Hollywood stuntman dị nso na egwuregwu vidio obere obere Stuntman Stuart.
Eze nke agbata obi na basketball na Ball King
Ball King bụ egwuregwu egwuregwu na-atọ ọchị na nke enyi nke ị ga-esi tụọ ihe ọ bụla ha nyere gị na nkata agbata obi.
Nwere ike izipu ozi nzuzo na offline na FireChat
Na-anọghị n'ịntanetị ị nwere ike izipu ozi nzuzo site na ngwa izipu ozi FireChat site na iji njikọ dịka Bluetooth ma ọ bụ Wi-Fi.
Gbado anya bụ mkpado dabeere na gallery ngwa ka mma ịhazi ihe oyiyi gị niile
Mkpado na onyogho ndị ahụ bụ otu n’ime njirimara ngwa a akpọ Focus na na ekele ha ị nwere ike ịhazi foto gị niile n’ụzọ nkeonwe.
Ibudata ma wụnye Sony 'Concept for Android' ROM na Xperia Z3
Site na XDA a ROM a na-leaked na-eburu ya ọhụrụ Sony maka ya ọnụ na 'Concept for Android' na nke ahụ dị ọcha gam akporo n'onwe ya.
Volkswagen esonyere n'ogo nke Hyundai, Honda, Buick, Chevrolet, Cadillac na GMC iji tinye Android Auto n'ime ụgbọ ala ha.
Otu esi eme mkpọ na WhatsApp
Ọkpụkpọ ama ama ama na WhatsApp dị ugbu a, maka nke a, anyị ga-ebu ụfọdụ ụzọ dị mfe iji nwee ike ịnụ ụtọ emoticon a.
Nanị ụzọ iji nwee ọ WhatsAppụ WhatsApp na Tablet gam akporo
Taa, anyị na-akụziri gị na-enwe WhatsApp na gam akporo mbadamba na a kpam kpam iwu n'ụzọ na-ekwere ka site WhatsApp
Nkuzi- Otu esi ahapụ ohere na gam akporo maka ịrụ ọrụ ka mma
Anyị na-akọwa ụzọ kachasị mma iji hapụ ohere na gam akporo. Ọ ga - eme ka arụmọrụ na ike nke ekwentị gị dị mma, yana ihe niile n'ụzọ dị mfe.
Ntuziaka Chrome OS na Nkuzi- Nkebi 2
Anyị na-ewetara akụkụ nke abụọ nke nkuzi a raara nye sistemụ arụmọrụ Chrome OS. Na nke a, anyị ga-emekọrịta mmekọrịta na gam akporo.
AKWERKWỌ ANDROID !!, Malware ọhụrụ na-emetụta 95% nke njedebe gam akporo
Achọpụtara Malware ọhụrụ nwere ike imetụta 95% nke njedebe gam akporo, gụnyere nsụgharị nke gam akporo kachasị ọhụrụ na nso nso a.
Ntuziaka Chrome OS na Nkuzi- Nkebi 1
Anyị na-eweta ndụmọdụ bara uru maka sistemụ arụmọrụ nke OS OS. Anyị na-egosi gị Shortzọ mkpirisi kachasị mma na otu esi agbakwunye njikwa nne na nna na oge.
Manuel Ramírez bụ ọkacha mmasị ngwa
Ngwa ndị kachasị amasị m nke m rụnyere na gam akporo ekwentị m na nke na-enyere m aka ịrụpụta ọrụ ma ọ bụ nwee oge m n'efu.
[APK] Ihe nkedo nke Arrow, ihe ndozi ohuru Microsoft maka gam akporo
Microsoft na-eju anyị anya ọzọ site na iji ngwa dị elu nke nwere Arrow Launcher, ngwa ngwa nke ị na-agaghị echefu.
Igwe ahụ, bụrụ ntụpọ nke ink ojii na egwuregwu vidio nke nwere ọmarịcha ọhụụ mara mma
Igwe ahụ bụ egwuregwu vidiyo pụrụ iche maka mmetụ ọhụụ ya na maka ụzọ ahụ iji mee ka anyị nwee oji na ọcha nke na-asọba ihe niile.
Wụfee n'elu osisi iji zere ugwu na ihe mgbochi na Vault!
Vault! bụ ihe kachasị ọhụrụ sitere na Nitrome, ụlọ egwuregwu vidio vidio na-egosi ọrụ ya nke ọma na egwuregwu vidio na-atọ ụtọ nke ogo ọrụ dị elu.
Otu ihe omimi zuru ezu laghachiri anyị na Gabriel Knight: Mmehie nke Nna
Gabriel Knight: Sierra Leone wepụtara mmehie nke Nna na afọ 1993, ugbu a ọ laghachiri gam akporo mgbe eweghachitere ya n'afọ gara aga.
Ihe a na-aga ewu ọzọ na Mountain Ewu Ewu Mountain
Ugwu Ugwu Ugwu bu ebe di nma ma di uto ebe nkpi ga-arigo elu na nmali na mmegha amara.
Ngwa 3 iji melite ahụmịhe ngosi mkpọchi mkpọchi na Android Lollipop
Ngwa mkpọchi ihuenyo atọ na gam akporo Lollipop nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ jiri ụfọdụ atụmatụ dị mma.
Ihe omume ohuru nke Game nke n'ocheeze dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play
Anyị enweela ọhụụ ọhụụ nke Egwuregwu nke n'ocheeze dị na ibudata na Playlọ Ahịa Google.
[APK] Budata ma wụnye Google Photo ọhụrụ nke nwere ọtụtụ njirimara ọhụụ
Taa, anyị na-ewetara gị ụdị ọhụụ Google Foto jupụtara na akụkọ ọma banyere njikwa nke ọba anyị.
TapDeck bụ ngwa nke ewezuga inweta akwụkwọ ahụaja dị elu, nwere ọrụ netwọkụ mmekọrịta iji chọta na ịkekọrịta akwụkwọ ahụ aja.
[APK] Download ugbu a ụdị WhatsApp ọhụrụ nke jupụtara na ozi na-atọ ụtọ
Taa, anyị na-ewetara ma kọwaa ọhụụ ọhụrụ nke WhatsApp juputara na akụkọ na-atọ ụtọ.
Gam akporo 5.1.1 Lollipop melite na Sony Xperia Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 na Z2 Tablet
Gam akporo 5.1.1 dị ebe a maka ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche na Xperia Z: Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 na Z2 Tablet
Smart ihuenyo On Off, na-enwe a smart ihuenyo gị gam akporo ọnụ
Taa, anyị na-akwado n'efu Smart Screen On Off ngwa, ngwa nke ga-enye gị gam akporo ọnụ gị nwere arụmọrụ ihuenyo ọhụụ.
Mkpọchi ihuenyo mkpọchi na-enweghị Lollipop? Anyị na-akọwa otu esi eme ya.
Ọ bụrụ n’inweghị Android Lollipop, anyị ga-egosi gị ụzọ kachasị mma iji lelee ọkwa ma soro ha rụọ ọrụ. Ngwa dị mfe na n'efu.
Gentle Oti mkpu, ike n’azụ oti mkpu a ngwa
Ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ihe na nhazi ahụ, Gentle Oti mkpu na-apụ apụ maka nnukwu nhọrọ dị iche iche ma e jiri ya tụnyere ụdị ngwa ndị ọzọ.
Ndị a bụ ngwa kachasị amasị Francisco Ruiz: Ngwa dị mkpa maka gam akporo m
Taa, m na-eweta ngwa dị mkpa maka gam akporo m, abụ m Francisco Ruiz na nke a bụ ihe enweghị ike ịla n'iyi na njedebe gam akporo m.
Foto Google+ mechiri na August 1, oge ịgbanwee gaa na Foto Google
Foto Google+ mechiri na August 1 iji nye ohere maka Foto Google, ngwa nnwere onwe ọhụrụ nke Google nke ga-elekọta ihe oyiyi gị niile.
[APK] Budata ma wụnye ụdị ọhụụ nke You Tube na mmelite ọhụụ na-atọ ụtọ
Taa, anyị na-akọwa otu esi ebudata ma wụnye ụdị ọhụụ nke You Tube iji nwee ọ featuresụ na njirimara ọhụụ ya niile tupu onye ọ bụla
Taa, enwere m obi ụtọ ịmebata gị ma kụziere gị otu esi etinye Rom kacha mma maka Lenovo K3 Note.
[APK] Ihe niile OG You tube Downloader na-enye anyị, ngwa iji lelee ma budata ọdịnaya site na Tube tube ozugbo na gam akporo gị
Taa, ewezuga ịkekọrịta APK nke OG You Tube Downloader, anyị na-egosi gị ụzọ dị mfe iji ya na vidiyo.
Ngwa Hyperlapse Microsoft nke na-eme vidiyo vidiyo oge dị maka onye ọ bụla
Hyperlapse bụ ngwa ọhụrụ dịịrị onye ọ bụla n’ikpeazụ mgbe ọ hapụsịrị beta na ọ bụ naanị ụfọdụ ngwaọrụ.
Strategic ero agha na ero agha: Space!
Egwuregwu Egwu: Oghere bụ ezigbo atụmatụ egwuregwu iji kpọọ ụfọdụ egwuregwu dị mma nke sitere na PlayStation Network.
Ulateomie Rafa Nadal na Stick Tennis Tennis
Ezigbo ihe egwuregwu tennis na Stick Tennis Tour nke na-etinye anyị n'ihu egwuregwu ọsọ ọsọ a ga-edozi na sekọnd ole na ole.
Oku nke Mini Squad, lanarị zombie hecatomb na ndị otu gị
Oku nke Mini Squad bu uzo eji eme ebe anyi gha agha igbu otutu zombies ya na ndi agha anyi.
Android 5.1.1 ga-abịa na Xperia Z2 na Z3 na njedebe nke July
Sony kwadoro na Xperia Z2 na Xperia Z3 ngwaọrụ ga-emelite ya na gam akporo 5.1.1 tupu njedebe nke July.
Thunder Jack's Log Runner, onye na-egbu osisi na ikuku nke onye na-agagharị agagharị nke ga-ejide gị
Thunder Jack's Log Runner na-etinye gị n'ọnọdụ nke ịghara ịdaba na osisi ma daba na mmiri.
Cloudifile maka mmekọrịta gam akporo na encrypts data na folda Dropbox na kọmputa gị
Cloudifile na-abịa na ebumnuche nke ịnye nchebe na nzuzo ka ukwuu na nchekwa Dropbox anyị nwere na kọmputa.
Etu esi kpọghee Bootloader nke Huawei P8 Lite, site na ikikere site na Huawei
Taa Ops m na-akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ otu esi kpọghee Bootloader nke Huawei P8 Lite na ikikere na nkwenye nke Huawei n'onwe ya.
Chọta WiFi hotspot n'efu nso gị na WiFiMapper
WiFiMapper bụ ngwa zuru oke maka ezumike ndị a iji chọta akara WiFi n'efu maka gị nso ebe ị nọ.
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma igwu egwu na WC: Taa, WC Games
New ngalaba na Androidsis ebe anyị na-ewetara ihe kacha mma gam akporo egwuregwu na-egwu na WC, taa anyị na-amalite na WC Games.
WesmartPark, ịpasa na Barcelona na Madrid dị mfe ma dịkwa ọnụ ala
Taa, anyị na-akọwa ọrụ nke WesmartPark, ngwa nke ga-enye anyị ohere ịpasa na Barcelona na Madrid mfe na ọnụ ala, na-echekwa ihe ruru 60% nke ọnụego mbụ na ogige ntụrụndụ.